I-AT & T: Ukuthengiswa Okuphelele okulandelwa ukulethwa okuyinhlekelele | Martech Zone
I-AT & T: Ukuthengiswa Okuphelele okulandelwa ukulethwa okuyinhlekelele
NgoLwesihlanu, Agasti 31, 2007 NgeSonto, Septhemba 2, 2007 Douglas Karr
Lapho sinquma ukusuka ehhovisi lethu siye kwelinye elisha, omunye wabantu bokuqala engibabizile kwakungu-AT & T. Akukho okwakubaluleke kakhulu kulokhu kuqinisekisa ukuthi ifeksi nezingcingo zethu zivuliwe.
Ngemuva kokuhamba ngezwi okumbalwa, ummeleli uthathe ucingo ngokushesha waphendula yonke imibuzo enginayo. Wayemnandi, enolwazi futhi elusizo kakhulu. Sinqume ukuthutha ngoMgqibelo ngezingcingo ezintsha ezizongena ngoLwesihlanu. Ukuba yimpelasonto ende, besicabanga ukuthi kuzothatha kancane izingcingo futhi ngeke kuthinte amaklayenti ethu namathemba ethu.
Sibe nenombolo engu-1-800, inqwaba yemigqa yokugingqika, ulayini we-fax ozinikele, kanye ne-DSL yebhizinisi lebhizinisi lethu elincane. Ehhovisi elisha, sihlanganise ukufinyelela kwe-inthanethi nesivumelwano sethu sokuqasha kwazise lesi sakhiwo sinezinto ezithile zokuxhumana zenethiwekhi zenkampani enamathani we-bandwidth.
Besigcina inombolo engu-1-800 kepha besidinga ukuthola izinombolo zocingo ezintsha ngoba sisezingxenyeni ezihlukile zedolobha, ngakho-ke sikhethe ukungena ezinyangeni ezintathu zemiyalezo yamahhala kulayini wakudala ukutshela amakhasimende ethu izinombolo zethu ezintsha zefoni . Sivale ucingo ngenombolo yethikithi esizobhekisa kulo uma kuba nezinkinga.
Yilapho Ukuphela Kwaphela khona
Cishe isonto ngaphambi kokuhamba kwethu, i-DSL yethu yaphuma. Ngemuva kosuku nengxenye lokukhuluma ne-AT & T, ngezithembiso zokuthi kuzoba ngaphambi kokuphela kwebhizinisi (ngayizolo), ekugcineni sayibuyisa i-DSL yethu. Kunzima kakhulu enkampanini yezobuchwepheshe eku-inthanethi enethimba lokuthengisa eliphumayo elizolithengisa ngaphandle kokufinyelela. Iningi lawo wonke umuntu lalisebenza ekhaya kunokulinda.
Sibe nenhlanhla ngathi, i-AT & T ibinenqubomgomo enhle yokubuyiselwa kwemali ekhululekile. Ezinkulungwaneni zamadola ebhizinisini elahlekile sathola isikweletu esingu- $ 119 kusikweletu sethu.
Kunzima kakhulu ukuthi iqembu lokuthengisa eliphumayo lithengise ngaphandle amafoni. Yilokho kanye okwenzeka ngosuku olulandelayo. Kubukeka sengathi ezinye 'glitch' ngokuhamba kwethu zibeka ngokushesha insiza iyama kolayini bethu be-DSL nezingcingo. Silahlekelwe amafoni ngolunye usuku nengxenye. Manje ngase ngicasukile kancane.
I-AT & T yathumela uchwepheshe omkhulu wezinsizakalo owayesebenza nomunye umfana ongaphandle ukuthola ulayini we-DSL. Lapho amafoni ekugcineni ebuyiselwa emuva kwi-DSL aphuma futhi. Amanye amahora ambalwa ayahamba kodwa uPatrick uyaphumelela futhi asibuyisele ku-100%.
Kuze kube namuhla ekuseni.
Njengoba ngingena emsebenzini namhlanje ekuseni, ngitshelwa ukuthi i-DSL iphansi futhi. Akunasidingo sokushayela noma ngubani, akunjalo? Abafana abambalwa babenamakhadi we-Sprint ehhovisi futhi babeshaya inhliziyo yethu size sifike ehhovisi elisha (lapho inethiwekhi yayivele ikhona).
Olayini befoni baphansi futhi… nohlobo lwe. Uma uwabiza, ayakhala futhi ayakhala. Uyayikhumbula imiyalezo engi-ode ngayo ngezinombolo zocingo ezintsha? Lokho akusebenzi okwamanje. Ngakho-ke manje asinazo izingcingo futhi asinayo i-DSL. Ngifuna ukubuyela embhedeni.
Esikhundleni salokho, sathutha zonke izinto zethu futhi ngathuthela uhlelo lwe-PBX endaweni entsha. Ngemuva kwamahora ambalwa, umlungisi wethu we-AT & T uyabonakala. Ngemuva kwemizuzu eyi-15, uthi:
Kukhona okungahambi kahle kulayini ngakho-ke kufanele bathole umlungisi “wekhebula” ukuze abone ukuthi kwenzekani. Uzophuma kusasa ngiyatshelwa. Ngalesi sikhathi, umphathi wami omkhulu ungivakashela futhi ahlole ukuhamba. Ngokujabulisayo, usegumbini njengoba ngibanjiwe futhi ngidluliselwa komunye umuntu uye komunye, komunye, komunye olandelayo. Inguquko ngayinye ngicelwa ubufakazi bokuthi yi-akhawunti yami (izinombolo ezi-3 zokugcina kumthethosivivinywa) futhi ngezikhathi ezithile, ngicelwa izinombolo ze-oda (nginezimbili manje… enye yokuhamba, enye yokulungisa) .
Umphathi wami uyalalela njengoba ngiphinda ngobuchule isonto lethu lobunzima nge-AT & T - ngiveza ukuthi kungakanani ukuthengisa, ukuthi kungakanani ibhizinisi, nokuthi kungakanani ukuthembeka esilahlekelwe yisonto eledlule namakhasimende ethu namathemba ethu. Kuyangimangaza ukuthi ngiyakwazi ukungamemezi noma ngiphokophele, njengoba ngichaza - ngemininingwane eminingi - isonto elihlaba umxhwele i-AT & T linginike lona. Khumbula, yisonto lami lesithathu ngisebenza. 🙂
Sobabili siyamangala ukuthi ingxoxo ngayinye nomuntu ocingweni iphetha ngokuthi, “Ungasho ukuthi wenelisekile ngenkonzo oyitholile namuhla?”. "Cha" impendulo yami ephindaphindiwe.
Ingabe Ufuna Izindaba Ezinhle Noma Izindaba Ezimbi?
Manje senginochwepheshe omkhulu manje osesakhiweni futhi osebenza ngenkinga yekhebula. Ube lapha amahora ambalwa manje kepha uthola ukuthi izingcingo ziyasebenza. Vele, ukugijima eduze kwephaneli lethu le-PBX yi- $ 25 njalo ngemizuzu eyi-15 (kungani bengasho nje u- $ 100 / hr?).
Uthi, "Ufuna izindaba ezimnandi noma izindaba ezimbi?".
"Ngiyacela, izindaba ezinhle.", Ngiyaphendula.
Uthola izingqinamba ngentambo yocingo esakhiweni esivele ikhona bese engitshela ukuthi “Azikho izindaba ezimnandi, ayikho indlela yokuthola ulayini.”
Ngeke ngithathe impendulo engu-NO.
Sinezintambo ezingaba yikhulu ze-CAT100 ezihamba phakathi kwesikhungo sedatha nendawo yethu yehhovisi ngakho-ke ngiphakamisa amapaneli ambalwa ngithole lapho zidlula khona. Kukhona ikhebula-ndlela ku-firewall nophahla lokwehla phakathi kwalo negumbi lapho izintambo zocingo zingena khona. Ungumugqa onyawo oqonde ku-5 ​​kuye ku-30. Uyahamba akhiphe ikhebula elolini lakhe agijime cishe ikhulu lekhebula.
Kungo-9PM manje sesinezingcingo ezibukhoma esakhiweni. Ngilinde uchwepheshe ukuthi aqedele umsebenzi wakhe wokugcina - unginike isikhathi sokubhala konke lokhu okuthunyelwe kwebhulogi. Olayini bezingcingo manje sebenezintambo ezincikene nohlelo lwe-PBX.
Kusasa okumele ngikwenze ukuthola enye ikhebula kanye namajack we-RJ11 futhi ngingenza i-hop kusuka kumajack amasha kuya ohlelweni lwe-PBX ukuze sibe nezingcingo ngoLwesibili.
Okungukuthi, ngemuva kokuhamba. Ngizoya ekuseni ngakusasa ngiyengamele ukuhanjiswa kwehhovisi. Iqembu selivele lipakishe yonke into, ngakho-ke abahambayo kufanele nje badinge ukuyisusa kusasa. Kusazoba usuku olude ngiqinisekile.
Ngizoqinisekisa ukuthi sesikhuphukile ngama-100% amafoni ngokuphela kwebhizinisi kusasa. Namuhla ngifaka inethiwekhi yethu, ngivikele izintambo ezingenantambo, iphrinta yenethiwekhi, ihabhu, futhi ngafaka izintambo kuwo wonke ama-cubicles kusuka ku-central patch panel. Ngiphinde ngafaka izintambo kuyo yonke imigqa yocingo kusuka kuphaneli ye-patch kuya ohlelweni lwethu lwe-PBX. Ngaphandle kwe-AT & T, ngithole ithoni lomsebenzi owenziwe.
NgoLwesibili, ngizobe ngikhuluma nocingo kwa-AT & T ukubona ukuthi kungani kufanele ngigcine ibhizinisi lethu kubo. Ukuphela kwezinto engithole ukuthi zisebenze kahle yilezi:
Yeka ukuthengisa lokho ongakwazi ukukuletha, i-AT & T. Bekuzoba nzima kangakanani uku:
Shayela ukuqinisekisa ngaphambi kokunqamula i-DSL yethu?
Shayela ukuqinisekisa ngaphambi kokunqamula ulayini wefoni yethu?
Shayela ukuqinisekisa ngaphambi kokunqamula i-DSL yethu (ngokwesibili)?
Shayela ukuqinisekisa ngaphambi kokunqamula i-DSL yethu (okwesithathu)?
Ngabe uchwepheshe onolwazi uhlangane nami ngaphambi kosuku lokuhambisa ukukhulisa isakhiwo esisha nokuhamba ngokulandelana komsebenzi? Ngingakhokha ngenjabulo u- $ 25 / hr ngemizuzu engu-15 ngalokho!
Kungo-9PM. I-Tech isiqediwe futhi wasebenza ngesinqe sakhe ukuqinisekisa ukuthi ngijabule. Ngijabule naye, kubi kakhulu enkampanini yakhe, noma kunjalo. Ngiya ekhaya. Ngidinga ukubuya lapha emahoreni ayi-11 kwabashukumisayo futhi nginemizuzu engu-45 ngemoto ngiya ekhaya.
Ngicabanga ukuthi yingakho beyibiza nge- “Labor Day Weekend”!
QAPHELA 9/1: Inombolo engu-1-800 isashayela inombolo yocingo endala futhi ukubanjwa komyalezo akuphendulwanga. Ngemuva kokukhuluma neqembu elingu-1-800, kubonakala sengathi akekho noyedwa owake wafaka i-oda lomsebenzi ukuze lowo layini uqondiswe kabusha. Ngemuva kokukhuluma nabantu aba-4 abehlukene, ngithole uNjiniyela ozodlula usuku loku-oda (usuku lokuqala lwebhizinisi, ngakho-ke kuzoba ngoLwesibili oluzayo) ukuthola inombolo eyi-1-800 esebenza namuhla.
Kubukeka njengamanye amahora angu-24 ngaphambi kokuthi kuvulwe umlayezo. Kufanele athumele i- I-FAX ukuyikhanyisa. Bubula.
QAPHELA 9/2: Ngasezolo izolo kufanele ngabe sixhume ngephutha kuWizard of Telephony. Ngikholwa ukuthi igama lakhe kwakunguDemetria - kepha konke okunye wakusebenza! Ngibe ngufakazi wengxoxo abe nayo nomunye ummeli lapho aqala khona ukusebenza kunombolo yomsebenzi eyi-1-800 njengoba eyithumela ngoLwesibili oluzayo. Unamathele kithi intambama yonke waze wenza nomyalezo ukuthi awudlulisele. Noma ngubani u-Demetria - I-AT & T idinga ukumbeka ophethe isigaba “sendlela yokuphatha ikhasimende”!
Siyabonga okuhle sizobe sesilungele uLwesibili!
Amanye amakaki we-Google Map
Aug 31, 2007 ngo-8: 38 PM
Hawu Ndoda! Noma yiliphi ibhizinisi elijwayelekile belizokhipha zonke izitobhi ukuze lisuse ukusilela kwensizakalo yalesi silinganiso.
Inkinga nge abaningi izinkampani ezinkulu kakhulu njenge-AT & T ukuthi zibona kungasifanele isikhathi sabo ukwamukela noma yini engalingani ncamashi izinqubo zabo zokusika amakhukhi. Yiba nesimo esiwela ngaphandle kwesilinganiso sabo esilindelekile futhi ukhonjwe.
Ngicabanga ukuthi babona ukuthi bakhulu ngokwanele ukuthi ibhizinisi lakho alinandaba nabo. Ngiphatheka kabi nge-tech eyodwa abayithumele endaweni yakho. Ngiyabheja ukuthi abamtshelanga ukuthi uzosebenza ntambama ngoLwesihlanu ngaphambi kwempelasonto yeholide.
Aug 31, 2007 ngo-9: 47 PM
Nginawe, Chris. Itechnology yesevisi engixhumanise kulobubusuku yenze umsebenzi omkhulu futhi yayingumuntu omuhle impela. Ngijabule futhi ukuthi uthathe isikhathi sakhe ukuzama ukulungisa udaba kunokumane abheyili njengechwepheshe yokuqala.
Aug 31, 2007 ngo-8: 56 PM
UMaBell uphinde futhi…. Angikaze, NGEKE ngizwe izwi elihle ngenkonzo ye-DSL. Hhayi ngombono wobuchwepheshe, hhayi ngombono wesevisi. Bengihlala nomuntu osebenza ngekhebula uqobo, kufaka phakathi ukuxhumana kwefoni yami neVoIP. Kuze kube manje, azikho izinkinga. Futhi ngineqiniso lokuthi lokho kungukuhlonipha uhlelo lwezintambo zomsindo - ucingo olulodwa lwethusi, umthombo owodwa wakho konke. Vele angikulangazeleli ukunqamuka kukagesi… yikes!
Aug 31, 2007 ngo-9: 49 PM
Kuyindida ukuthi ngine-DSL ene-AT & T ekhaya futhi ibilokhu iqinile iminyaka emibili nengxenye. Ngiyajabula ukuthi angikaze ngibize ushintsho enkonzweni, noma kunjalo!
Sep 1, 2007 ku-3: 45 AM
Lokho kuyamangaza futhi kuyesabeka. Ngabe uzocela noma yisiphi isinxephezelo? Ngiyethemba impela ukuthi lokhu kuzotholwa kahle futhi umuntu othile we-AT & T akubone lokhu.
Ngiyethemba unenhlanhla engcono ngokuhamba konke.
Sep 1, 2007 ku-6: 28 AM
Yeka ukungcola. Kwenza uhlobo oluthile lokufinyelela okungenantambo okukuyo yonke indawo lubukeke lilihle, akunjalo? Yize noma lokho kungasoze kumise abangaqeqeshiwe ekuvaleni izinto ngesikhathi esingesihle…
Uxolo uqale kahle kabi ngempelasonto ende - loooonggg -.
Sep 1, 2007 ngo-1: 05 PM
Ngingeze isibuyekezo esingu-9/1 namhlanje.
Sep 1, 2007 ngo-4: 38 PM
Lokhu kuthatha ukuthi "umfana omusha athole umsebenzi ongcolile" ezingeni elisha lonke! Ngiyethemba sisazokubona kusasa!
Sep 1, 2007 ngo-9: 00 PM
Mina noKatie sisahlela ukuba lapho.
Olunye iqhawe elingenagama ku-AT & T lisisize ekuxazululeni izingqinamba zethu zokugcina kule ntambama. Kumele ngabe usebenze ku-akhawunti yethu amahora ama-4 noma ama-5 ngqo. Ngesinye isikhathi, waxoxisana nomunye umuntu ocingweni wabatshela ukuthi babhale i-oda lomsebenzi futhi wayezoliqedela NGESIKHATHI sisecingweni. Angazi ukuthi wayengubani, kodwa ngijabule kakhulu ukuthi kwenzeka ukuthi alubambe ucingo!
Sep 1, 2007 ngo-11: 22 PM
Yebo! Ngiyethemba ukuthi uzokhokhelwa imali ethe xaxa ngokuba yimpelasonto yamaholide. Futhi siyakuhalalisela ngokuqhubeka ukunciphisa isisindo!
Sep 2, 2007 ngo-9: 09 PM
Sawubona uDoug uyajabula ukuthi konke kusebenze ngemuva kwazo zonke izinkinga ezimbi. Nginesiqiniseko sokuthi sonke sinezindaba zethu ezesabekayo esingazixoxa kodwa ezakho ziphezulu eziningi engizizwile noma ebengizibandakanya kuzo! Inhlanhla kusuka lapha kuye phambili.